Etu esi eji gam akporo Ngwaọrụ Manager | Gam akporosis
Na post nke taa, achọrọ m itinye vidiyo nke m na-akọwa ya Gam akporo Ngwaọrụ Manager ọrụ, a kpam kpam free ngwa na anyị nwere ike ibudata na Google Play Store n'okpuru aha Android Ngwaọrụ Manager nakwa na o nwere nhọrọ ole na ole maka nchekwa na ọnọdụ nke ọnụ gam akporo anyị.
Ọ bụ ezie na ngwa ahụ achọghị ihe ọmụma kọmputa ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ ebe ọ bụ na ọ kachasị mfe anyị nwere ike ịchọta na ngwa ngwa maka gam akporo, achọrọ m ịme nke a video nyochaa nke mere na ị pụrụ ịhụ ọrụ nke a na-akpali akpali ngwa na ọbụna ọtụtụ ndị gam akporo ọrụ maara na ọ dị.
1 Gịnị gam akporo Ngwaọrụ Manager na-enye anyị?
Gịnị gam akporo Ngwaọrụ Manager na-enye anyị?
Android Ngwaọrụ Manager o gam akporo Ngwaọrụ Manager, na-enye anyị ihe zuru ezu nchekwa maka anyị gam akporo furu efu ma ọ bụ zuru, interface, nke, dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo na elu nke isiokwu a, dị mfe iji ma nke ahụ ga-enye anyị ohere nke chọta ebe gam akporo anyị furu efu ma ọ bụ zuru.
Ozugbo ị banyere onye ọrụ interface, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịhọrọ a Akaụntụ Google nke anyi nwere jikọtara ngwaọrụ gam akporo anyị chọrọ ịchọta ma ọ bụ chọta. Ozugbo anyị banyere paswọọdụ ziri ezi nke akaụntụ jikọtara na ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ahụ, a ga-egosi anyị ndepụta nke njedebe nke anyị nwere ike ịhọrọ ọnụahịa anyị chọrọ ịchọta, ọnọdụ nke, mgbe ọ bụla agbanwuru ya, ga-eme gosi anyi ya site n’obere oke njehie nke pere mpe pere mpe na eserese ngosi.
Nhọrọ ọzọ nke ewepụtara anyị Android Ngwaọrụ Manager, bu ohere inweta na a akaụntụ nnabata, nhọrọ na-adọrọ mmasị nke ga-enye anyị ohere ịchọta ngwaọrụ furu efu nke, dịka ọmụmaatụ, onye ọ bụla amaara ama maara akaụntụ Google na paswọọdụ ha. Nke a dị mma iji nyere enyi aka, mgbe niile na nkwenye ha, iji chọọ ọdụm furu efu ma ọ bụ nke ezuru ohi.
E wezụga inwe ike ịchọta furu efu gam akporo ọnụ, na-akpọ ụdaolu na oke olu maka nkeji ise ma ọ bụ ruo mgbe anyị pịa bọtịnụ Ike, Njikwa Ngwaọrụ gam akporo, na-enyekwa anyị ohere ihichapu ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụ dịka ọ dị mfe igbochi ya iji ojiji na-enweghị ikike, niile site na anya naanị site na ịnweta njikọ connectionntanetị site na WiFi ma ọ bụ netwọk data.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Etu esi eji njikwa gam akporo gam akporo, njikwa gam akporo
6 Ntọala Storelọ Ahịa Google Play nke eleghị anya ị maghị maka ya
Waze na-agbakwunye na mbipute 3.9 na Waze Places, enyemaka na-adọba ụgbọala na ndị ọzọ